गर्न को लागी: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
तपाइँको समर्थन जारी गर्न को लागी तुरुन्त आवश्यक छ। यस साइटमा सामिल हुनुभयो भने तपाईले अनुदानको साथ मार्टिन भ्रिजल्यान्डको कामलाई समर्थन गर्नुहुन्छ। यदि तपाईं पनि चाहानुहुन्छ लाखौं व्यक्तिहरू प्रत्येक वर्ष बिभिन्न समाचारहरू पढ्नका लागि सक्षम भए, तपाईको समर्थनलाई धेरै स्वागत छ। तपाई कति चन्दा दिन चाहानुहुन्छ भन्नेमा यो निर्भर गर्दछ। तपाइँसँग सामेल भएर मलाई बाँच्नको लागि मद्दत गर्दछ र हामी सँगै हामी हाम्रो स्वतन्त्रताको लागि लड्दछौं।
नयाँ खाता दर्ता गर्नुहोस्
लग - इन नवीकरण वा अवस्थित सदस्यता परिवर्तन गर्न।
आफ्नो सदस्यता स्तर छान्नुहोस्
महिना सदस्य - € 2,00 - 1 महिना
तपाईं एक सदस्य हुनुहोस् र प्रति महिना €2दान गर्नुहोस्
मासिक सदस्य खरिदकर्ता - € 5,00 - 1 महिना
तपाईं एक सदस्य हुनुहोस् र प्रति महिना €5दान गर्नुहोस्
महिना सदस्य चांदी - € 10,00 - 1 महिना
तपाईं एक सदस्य हुनुहोस् र प्रति महिना € 10 दान गर्नुहोस्
महिना सदस्य सुन - € 20,00 - 1 महिना
तपाईं एक सदस्य हुनुहोस् र प्रति महिना € 20 दान गर्नुहोस्
वर्ष सदस्य - € 25,00 - 1 वर्ष
तपाईं एक सदस्य हुनुहोस् र प्रति वर्ष 25 दान गर्नुहोस्
वार्षिक सदस्य खरिदकर्ता - € 65,00 - 1 वर्ष
तपाईं एक सदस्य हुनुहोस् र प्रति वर्ष 65 दान गर्नुहोस्
वर्ष सदस्य चांदी - € 125,00 - 1 वर्ष
तपाईं एक सदस्य हुनुहोस् र प्रति वर्ष 125 दान गर्नुहोस्
वर्ष सदस्य सुन - € 250,00 - 1 वर्ष
तपाईं एक सदस्य हुनुहोस् र प्रति वर्ष 250 दान गर्नुहोस्
Kortingscode	- मान्य - अवैध
आफ्नो भुक्तानी विधि छनौट गर्नुहोस्
PayPal	 क्रेडिट / डेबिट कार्ड	 डेबिट संग्रह (आईडीएएल मार्फत प्राधिकरण)
म गोपनीयता नीतिसँग सहमत छु
कुल भ्रमण: 2.631.513
ब्ल्याक लाइभले १००% फरक पार्छ तर दक्षिण अफ्रिकी लिन्च अभ्यासहरू चाहनुहुन्छ? को फाइदा? अधिक विवरण मा जर्ज फ्लोयड
डोनाल्ड ट्रम्पले वीणा बजायो भने रोम जलिरहेको बेला सम्राट नेरोले जस्तै
मार्टिन भिजल्याण्ड op ब्ल्याक लाइभले १००% फरक पार्छ तर दक्षिण अफ्रिकी लिन्च अभ्यासहरू चाहनुहुन्छ? को फाइदा? अधिक विवरण मा जर्ज फ्लोयड
विल्फ्रेड बेकर op ब्ल्याक लाइभले १००% फरक पार्छ तर दक्षिण अफ्रिकी लिन्च अभ्यासहरू चाहनुहुन्छ? को फाइदा? अधिक विवरण मा जर्ज फ्लोयड
भविष्यमा op ब्ल्याक लाइभले १००% फरक पार्छ तर दक्षिण अफ्रिकी लिन्च अभ्यासहरू चाहनुहुन्छ? को फाइदा? अधिक विवरण मा जर्ज फ्लोयड
चेन्टल 74 op ब्ल्याक लाइभले १००% फरक पार्छ तर दक्षिण अफ्रिकी लिन्च अभ्यासहरू चाहनुहुन्छ? को फाइदा? अधिक विवरण मा जर्ज फ्लोयड
SalmonInClick op बाँध स्क्वायरमा हजारौं व्यक्तिहरूले जर्ज फ्लोइडको लागि विरोध प्रदर्शन गरे वा कसैलाई थाहा छैन?